Admin, Author at Thaw Zin
21Oct 2020 by Admin No Comments
အခုတလော အရမ်း Hot ဖြစ်နေတဲ့ News ကတော့ Google Analytics ရဲ့ New Version - Google Analytics4ဖြစ်ပါတယ်။ GA4 က AI Power Insights ဆိုပြီးပြာထားပါတယ်။ Universal Analytics နဲ့ လုံး၀ မတူတေတာ့ပါဘူး၊ Structures တွေရော Tracking Processes တွေရော အကုန်လုံး Completely Different ဖြစ်သွားပါပြီ။ ကျတော်တို့ Universal Analytics မှာ မြင်နေကျ အမြဲတမ်းပြောဖြစ်ကြတဲ့ Pageviews တို့ Sessions တို့ ဆိုတာတွေ မရှိတော့ပါဘူး၊ အခု Google Analytics4က Event Types နဲ့ ဖော်ပြပါတော့မယ်။ တကယ်တော့ New Version…
တစ်ခါ ပြောမှာတာကတော့ Search Query နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Query Refinement ပါ။ ကျတော်တို့ SEO သမားတွေအနေနဲ့ Website အတွက် Keywords တွေကို စီမံခန့်ခွဲတဲ့ အခါ Query Refinement ကိုသိထားဖို့ လိုသလို၊ တစ်စုံတစ်ခုခုကို သိချင်တဲ့ အခါ Google မှာ ရှာလေ့ရှိတဲ့ Google User တွေ အတွက်လည်း Knowledge နေနဲ့ သိထားသင့်ပါတယ်။ Query Refinement ဆိုသည်မှာ User တစ်ယောက်က Google မှာ သူသိချင်တဲ့ results အတွက် Keywords တစ်ခုခုနဲ့ ရိုက်ရှာလိုက်တယ် ဒါပေမယ့် ရိုက်ရှာလိုက်တဲ့ Keywords က သူလိုချင်တဲ့ Results တွေကို မတွေ့ပဲ Search Result က တခြားသူမလိုချင်တဲ့ ဟာတွေ ဖော်ပြနေတဲ့အခါ - အဲ့ သူရှာခဲ့တဲ့ Keywords ကို ပြန်ပြင်ပြီးတော့ ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ ထပ်ရှာတာကို ဆိုတာပါ။ ဥပမာ - SEO ကို စလေ့လာချင်တဲ့ သူတစ်ယောက်က Google မှာ "SEO" လို့ရိုက်ရှာလိုက်တယ် ဆိုပါစို့၊ အဲ့တော့ Google Search Result မှာ SEO service Companies တွေ၊ SEO service ကြော်ငြာတွေ၊ Google Ad နဲ့ Run ထားတဲ့ Digital Marketing သင်တန်းတွေ ဖော်ပြနေတော့ အဲ့ user က Keywords ကို နောက်ပုံစံတစ်ခု "SEO Guidelines" ဆိုပြီး နောက်မှာ "Guidelines" ထပ်ထည့်ပြီး ပြောင်းရှာတဲ့ သဘောပါ။ SEO သမားတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ SEM(PPC) သမားတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် Query Refinement အတူသိထားရမှာ ကတော့ Search Query Types ပါ။ ကျတော်တို့ Search Engine မှာ ရှာနေတဲ့ မတူညီတဲ့ Search Queries ပုံစံ (၃) မျိုး.... (1) Navigational Query - ဒီ query type ကတော့ သူ့ရဲ့ particular website ကို ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ရှာတာပါ။ ဥပမာ - ရိုက်ရှာတာက "Youtube" ဆိုရင် www.youtube.com website ကို ဖွင့် ချင်လို့၊ "Facebook" လို့ ရိုက်ရှာရင်လည်း Facebook website ကို သွားချင်လို့။ အဲ့လိုမျိုး ရှာတဲ့ Keyword/Query က website ကို navigate လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရှာတာမျိုးပါ။ (2) Informational Query - ဒါကတော့ ထူးထူးခြားခြားပြောစရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ Search query ကaword oraphrase query format ပါ။ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Information ကိုသိချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရှာတာပါ။ ဥပမာ - "History of Myanmar" ဆိုပြီး ရှာတာမျိုးဆိုပါတော့။ (၃) Transactional Query - "transactional queries have commercial intent" ပါ meaning က။ သူကတော့ Marketing သမားတွေ လိုချင်တဲ့ Keywords/Query ဆိုပါစို့ပေါ့နော်။ User တွေက ပစ္စည်း တစ်ခုခုကို ဝယ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရှာတဲ့ Keywords ပါ။ ဥပမာ - "Computer table" အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ Product တွေကို ရှာတာ။ …
Google Analytics ကိုစသုံးခါစ Beginner တွေ အနေနဲ့ Bot Traffic ကို Prevent လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိမယ်မထင်ပါဘူး။ တော်တော်များများ Google Analytics (GA) ကို သုံးနေကြပေမယ့် Bot Traffic ကို Prevent လုပ်ထားသလား မလုပ်ထားသလားဆိုတာ တော်တော်များများ Check မလုပ်ကြပါဘူး။ ဒီအကြောင်းကို ဘာကြောင့်ရေးရသလဲဆိုတော့ တစ်ချို့ သော Website Owner တွေ၊ GA နဲ့ သတ်ဆိုင်တဲ့ သူတွေ Google Analytics သုံးနေပေမယ့် Traffic Bot ကို Accept လုပ်ထားတာမျိုးတွေ တွေ့ရလို့ပါ။ ဆိုတော့ အရင်ဆုံး GA နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Bot Traffic အကြောင်းကို ကျတော်သိသလောက်ပြောပြပါမယ်။ Bot Traffic ဆိုတာကတော့ non-human…
Web Analytics နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Digital သမားတွေ အနေနဲ့ Google Analytics နဲ့ Universal Analytics ကို Knowledge အနေနဲ့ သိဖို့လိုအပ်မယ်ထင်လို့ပါ။ မိမိ website မှာတော့ Google Analytics ကို Install လုပ်ထားတယ် ဒါမယ့် Universal Analytics ဆိုဒါနဲ့ကော ဘာတွေကွာလဲပေါ့။ Google Analytics အပြင် Universal Analytics အတွက် နောက်ထပ် Install လုပ်ရဦးမှာလား ဆိုပြီး အတွေးထဲမှာ မေးခွန်းလေးတွေ ရှိတတ်ကြမှာပါ။ တကယ်တော့ Universal Analytics ဆိုတာ Google Analytics ရဲ့ New Version တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Google က 2012 ခုနှစ်မှာ Classic Analytics Version…
ကိုယ်ရဲ့ Website တွေက Loading Speed Score ကောင်းကောင်းရှိရဲ့လားဆိုတာ သိထားဖို့ လိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ပုံမှန် Internet Speed နဲ့ ပဲ တစ်ချို့ Website တွေကို ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ Site Loading time ကြာတာကြောင့် Website ပေါ်လာဖို့ ကျတော်တို့ သေးခံပြီး စောင့်ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့သော websites တွေက Loading time အရမ်းကြာပြီးတော့ website visitor တွေ အတွက် စိတ်ညစ်စရာလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ Website က Fast Loading Time ရှိမှသာ Users တွေက Pages များစွားကို ဝင်ကြည့်ပြီး အချိန်ကြာကြာ ကိုယ့်ရဲ့ website ကို သုံးဖြစ်စေတာပါ။ Website က Slow Loading…
Content တွေကို AI နဲ့ ရေးမယ် ဆိုရင်ဖြင့် ….
အချိန်တွေ သိပ်ပေးစရာမလိုပဲ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ Content ကောင်းကောင်းတစ်ခုကို AI နဲ့ ဖန်တီးလို့ ရတယ်ဆိုရင် Content Writers တွေ အတွက် ရင်ခုန်စရာ တစ်ခုဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ Digital Technology ခေတ်မှာ AI (Artificial Intelligence) ရဲ့ အရေးပါမှုကလည်း တော်တော်ကြီးမြင့်မားလာ တော့ တစ်ချို့ သော Human Processes တွေကို AI အသုံးပြုပြီး Rotobts တွေနဲ့ အစားထိုးလုပ်ဆောင်လာကြတာပါ။ eg. chatbots, တို့ self-driving cars တို့ လက်ရှိ အသုံးပြုနေကြတာတွေ စသဖြင့်ပေါ့။ လူကိုယ်တိုင် လုပ်ရသော အလုပ်တွေကို AI အကူအညီဖြင့် အချိန်တို အတွင်း ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ လူ တွေက ကြိုးစားလာကြတာပါ။ ကျတော်တို့ SEO အတွက် Content…
Facebook Users တော်တော်များများက တစ်စုံ တစ်ခုဆို Facebook ပေါ်မှာပဲ ရှာလေ့ ရှိပြီးတော့ Browsers ဖွင့်ပြီး Google မှာ ရှာလေ့ မရှိကြဘူး၊ ဘယ်လို ရှာရမှန်းလည်း တစ်ချို့တွေဆို မသိကြဘူး။ သူတို့ သိတဲ့ ဆိုင်နာမည်ဖြစ်ဖြစ် company နာမည်ဖြစ်ဖြစ် Facebook ပေါ်တက်ပြီး တန်းရှာကြတယ်။ Facebook ကို Search Engine တစ်ခုလိုမျိုး သတ်မှတ်ပြီး တစ်ချို့ Users တွေ အသုံးပြုကြတယ် အဓိက အားဖြင့် ကျတော်တို့ နိုင်ငံမှာပေါ့။ အဲ့လိုမျိုး တစ်ချို့ user level တွေက Facebook ကို Search Engine ပုံစံ သုံးနေကြလို့ များ SEO ထဲကမှ Facebook SEO ဆိုပြီး ဖြစ်လာသလား။ တစ်ချို့…
SEO အတွက် Keywords ထည့်တယ်ဆိုတဲ့ Meta Keywords
Website တစ်ခုကို SEO လုပ်တယ်ဆိုရင် တော်တော်များများက ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Keywords ကို SEO အတွက် Website မှာ ထည့်ရတယ် ဆိုပြီး နားလည်ထားကြတယ်။ တစ်ချို့ က မေးကြပါသေးတယ် Keywords တွေကို ဘယ်လိုထည့်ရတာလဲ၊ Website ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ သွားထည့်ရတာလဲ၊ Meta Keywords ကို Minimum/Maximum ဘယ်လောက် ထည့်သင့်လဲပါ့......? ကျတော်လို Web Developers တော်တော်များများကလည်း ပုံမှန်အားဖြင့် Meta Keyword tag မှာ SEO ကောင်းချင်တဲ့ Keywords တွေ ထည့်ရတယ်ဆိုပြီးပဲ သိထားကြတာပါ။ အောက်က Example Code ကတော့ Meta Keyword tag ပါ။ ကျတော်တို့ Web Developers တွေကတော့ ဒီ Code…
Rel=prev/next markup ကို Google က 2011 ခုနှစ်မှာ introduced လုပ်ခဲ့တာပါ။ တစ်ချို့ Single Article Page တွေမှာ အောက်က "Previous" နဲ့ "Next" ဆိုပြီး Button တွေနဲ့ နောက်တစ်ခုကို ဆက်သွားဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးထားတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Prev/Next pages တွေကို Page Order စီဖို့ အတွက် Google ကိုနားလည်အောင် Rel=prev/next markup သုံးကြတာပါ။ Pagination ရှိတဲ့ web pages တွေ အတွက် ဒီ Markup ကို သုံးပြီး Google ကို first, second, third page ဆိုပြီး Page number အလိုက် Order…
20Aug 2018 by Admin 1 Comment
Website မှာ Search Form ပါရှိရင် Search URL Format ကို သိထားဖို့ လိုအပ်တယ်
Search Form ပါသော Site ကို SEO လုပ်တဲ့အခါ Site Structure Format တွေ Link Format တွေကို အရင်ဆုံး Research လုပ်ပြီးမှ site နဲ့ သင့်တော်တဲ့ Optimization Strategy ဆုံးဖြတ်ရပါလိမ်မယ့်။ မဟုတ်ရင် Doorway Pages တို့ Duplicate Links တွေဖြစ်လာနိုင်ပြီး Pages ရဲ့ priority အခြေနေပေါ် မှုတည်ပြီး User-Generated Links လိုမျိုးဟာတွေကို ပိတ်သင့် မပိတ်သင့် ဆုံးဖြတ်ရတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ကျတော် အပါဝင် Web Developers တွေကတော့ Code ကို ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ ရေးကြမှာပဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တူမှာ မဟုတ်ဘူး။ Developer ရေးထားတဲ့ site structure…